Galmudug oo beenisay warar laga baahiyay Shirka Dhuusamareeb | Keydmedia
Galmudug oo beenisay warar laga baahiyay Shirka Dhuusamareeb
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Galmudug Axmed Shire Falagle ayaa warkaasi ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin, islamarkaana ay baahinayaan dad doonaya inay carqaladeeyaan shirka ay Galmudug marti-gelinayso.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Maamulka Galmudug ayaa been iyo waxba kama jiraan ku tilmaamay war illaa xalay la hadal hayay oo lagu baahiyay baraha bulshada iyo warbaahinta qaar, oo sheegayay in Dhuusamareeb laga saarayo Ciidanka dowladda Federaalka Soomaaliya.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Galmudug Axmed Shire Falagle ayaa warkaasi ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin,isla markaana ay baahinayaan dad doonaya inay carqaladeeyaan shirka ay marti-gelinayaan.
"Ma jiraan sababo kalifi kara in Ciidamada Haramcad laga saaro Dhuusamareeb, kuwaasoo ka qeyb qaata amniga Magaalada," sidaas ayuu yiri Wasiir Falaqle.
Shirka Dhuusamareeb ee dhex-mari doona Madaxda Dowlad Goboleedyada HirShabeelle, Galmudug, Puntland, Koonfur Galbeed iyo Jubaland, ayaa looga hadli doona doorashooyinka, khilaafka siyaasadeed ee kala dhaxeeya Farmaajo maamulkiisa, amniga iyo dastuurka.
Gudiga Doorashooyinka Qaranka ayaa dhawaan ku dhawaaqay in doorashadda aaney waqtigii loogu tala-galay dhici karin, iyadoo uu dalabaday mudo 9 bilood oo dheeraad ah, oo laga billaabo marka uu dhamaado mudo xileedka Farmaajo.